Isitudiyo sikaMia - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDimitra
Istudiyo esicocekileyo nesinobubele kwindawo eneeflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezinegadi nendawo yabantwana.
Ilungele iiholide ezizolileyo nezipholileyo. Malunga ne-150M ukusuka elwandle kwaye kufutshane kakhulu nevenkile enkulu, iivenkile zokutyela, iibhari zaselwandle kunye nolwandle olunentlabathi lwaseKariani
Isitudiyo sikwiflethi okanye indlu ekwicomplex, ineyadi esecaleni yaye ikwi-150m ukusuka elunxwemeni, ilungele ukuphumla. Indawo yokuhlala yeKarian ekufutshane kakhulu neebhari zaselwandle kunye neevenkile ezinkulu
Le ndawo inokuhlala abantu abayi-4 kwibhedi elala abantu ababini enye neebhedi ezilala umntu omnye eziyi-2.
Ilungele iintsapho ezinabantwana, izibini okanye abahlobo.
Kukho iyadi enendawo yokupaka kunye nendawo yokudlala yabantwana.
Ikhitshi linezinto zokupheka, ifriji neoveni njengoko zibonisiwe, zikulungele ukuzisebenzisa uze wonwabele ukutya kwakho kwi-veranda yangaphambili.
Abantu abayi-4 banokubukwa kwii-atomic eziphindwe kabini kunye neebhedi ezi-2 ezilala umntu omnye. Ilungele iintsapho ezinabantwana, izibini okanye abahlobo. Kukho indawo yemoto nendawo yokudlala encinci yabantwana everandeni.
Ikhitshi linezixhobo nezinto ezisebenza ngombane ezinokusetyenziselwa ukuphumla kwi-veranda ngokuthatha ikofu yakho okanye isidlo!
Umbuki zindwendwe ngu- Dimitra
Inombolo yomthetho: 00000035337
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kavala